यी खानाः जसले तपाइँकाे आयु घटाउँदैछ
के तपाईंले आंशिक रूपमा प्रशोधित र अत्यधिक प्रशोधन गरिएको खानामा भएका भिन्नताबारे थाहा छ? अनि तिनले के फरक पार्छन् ? 'प्रशोधित खाना' भन्ने शब्दावली हिजोआज चलनमा छ। फ्रान्स र स्पेनमा गरिएका दुईवटा अध्ययनले त्यस्ता खानाको सम्बन्ध स्वास्थ्यमा असर पार्नुका साथै अल्पायुमै ज्यान जान सक्ने देखाएको छ।
उक्त अध्ययनले दैनिक रूपमा १० वर्षसम्म प्रशोधित खानाको चार अंशसम्म खाने मानिसलाई हेरेको थियो। उनीहरूमा मृत्युको जोखिम दैनिक एक अंश वा कम प्रशोधित खाना खानेभन्दा ६२ प्रतिशत बढी हुने देखिएको छ।
अनि थप एक उच्च प्रशोधित खानाको अंश थप्दा मृत्यु हुने सम्भावना १८ प्रतिशतले बढ्ने देखिएको छ। उच्च प्रशोधित खानासँग जोडिएको अर्को नराम्रो असर भनेको हृदयाघात वा स्ट्रोक हुने धेरै जोखिम रहनु हो। यस्तो थाहा हुँदाहुँदै पनि ब्रिटेनजस्ता केही मुलुकमा मानिसहरू आफ्ना लागि आधाभन्दा बढी क्यालोरी उच्च प्रशोधित खानाबाटै पाउँछन्। त्यसो भए हामीले निकै जोखिमपूर्ण खानालाई हाम्रो भोजनमा कसरी समेट्दै तिनको गुणस्तर बढाउने?
सादा ओट्स, कर्न फ्लेक्स र आंशिक प्रशोधन गरेर रेशादार बनाइएका गहुँका उत्पादन। तर जब त्यसमै उत्पादकहरूले चिनी, स्वाद र रङ्ग मिसाउँछन् ती अत्यधिक प्रशोधित ब्रेकफास्टका खानेकुरा बन्छन् ।
जब महत्त्वपूर्ण पोषणतत्त्वहरू हुने अप्रशोधित वा प्रशोधित खानालाई अधिक प्रशोधित खानाले विस्थापित गर्छ तब विभिन्न समस्याहरू सुरु हुन थाल्छन्। उदाहरणका लागि ब्रिटेनमा एक जना औसत मानिसले खाने ५६ प्रतिशतभन्दा बढी क्यालोरी अत्यधिक प्रशोधित हुने खानाबाट आउँछ।
- उत्पादनकर्ताले कुन हदसम्म बजार प्रवर्धन र ब्र्यान्डिङ गरिरहेका छन् भन्ने समेत जान्न महत्त्वपूर्ण हुन्छ। बीबीसी
२०७६ श्रावण २८ मंगलबार ०९:१५:०० मा प्रकाशित